Namuhla, bambalwa kithi kungaba ukuziqhayisa impilo enhle, isibalo sabantu abangakwazi kakhulu izinkinga izimpilo izifo ezingathi sína, ukwenyuka umkhuba oqhubekayo wokubuka yejeyomethri. ngemvelo Emibi ngendlela engafanele wokuphila, ukucindezeleka njalo, ngabanengekayo izinga ukudla, izingozi, ukwanda kwenani izifo lezinceku - konke lokhu akuyona uhlu oluphelele lwazo zonke izizathu, "ngiyabonga," lapho inani elandayo ibutho abantu abakhubazekile sika. Okufanele ukwenze uma enkingeni wangena endlini, lapho iminyango kokukokoda futhi kanjani ukukhubazeka - imibuzo eyinhloko ebuzwa yiningi labantu abadinga ngihlolwa.
Kuyaphawuleka ukuthi inqubo ukukhubazeka ezweni lakithi efana Awe-Steeplechase, futhi olude. Endleleni kukhona inala sizinqobe ukuze kukhona ngezinye izikhathi kunzima ngempela, ikakhulukazi ezimweni lapho isiguli nobungcweti kakhulu mayelana butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela inqubo. Ngakho-ke, umbuzo kuphi futhi kanjani ukuze uthole ukukhubazeka, kudinga ukucatshangelwa ngokucophelela kakhulu.
Ukuze yokubhaliswa ukukhubazeka kuyadingeka, okokuqala kunakho konke, zikhona izizathu ezinkulu (kwezokwelapha), owawuthi esibhedlela inikeza nokudluliselwa kwazo ngihlolwa. Thola ukukhubazeka kuphela uma okungenani ezimbili izimo ezintathu zinikelwa mthetho:
Ukugula okubangelwa ukukhubazeka, ukulimala, izifo nezinkinga zempilo ephelezelwa esitebeleni umzimba imisebenzi;
iziguli ukulahlekelwa ikhono ngokuzimela ukuzinakekela, hambisa, ukuxhumana, zula, ukulawula indlela aziphatha ngayo, bahlanganyele umsebenzi (ie izivimbelo esinqunyiwe noma ingqikithi msebenzi obalulekile);
okuvela isidingo izinyathelo zokuvikeleka komphakathi, kubandakanya ukuvuselelwa.
Uma isizinda ngenhla abakhona, ukwelashwa noma sivikelwe iziphathimandla wathumela isiguli ukuhlolwa lezempilo nezenhlalo (ITU) luhlolo. Lapho ukuthinta ITU kudingeka babe khona yonke imibhalo yokubhalisa yokukhubazeka: ipasipoti isicelo, isiqondiso ubufakazi bezokwelapha, okuyinto uqinisekise yokuthi ukwephula zempilo.
Special Commission uqhuba ukuhlola isiguli futhi wenze isinqumo. Uma isinqumo inguyebo, ochwepheshe setha ezifanele isimo ukukhubazeka bese ukhipha isitifiketi eqinisekisa. Kunamaqembu ezintathu ukukhubazeka: iqembu lokuqala e isidingo ukuthola iminyaka emibili, futhi eyesibili neyesithathu - unyaka owodwa. Izingane ezigulayo noma izingane zithole esigabeni 'ingane ekhubazekile ", ukuba semthethweni okuyinto kuxhomeke ngokuphelele kobukhulu yempilo (unyaka owodwa, eminyakeni emibili noma kuze kube ingane eba neminyaka eyishumi nesishiyagalombili).
Futhi yini okufanele uyenze futhi kanjani ukukhubazeka uma odokotela benqaba ukusungulwa wakhe? Ezimweni ezinjalo kubalulekile knock emagunyeni aphakeme we ITU noma ukuya enkantolo icala inselele isinqumo yiKhomishana. Kuyaphawuleka ukuthi yokugcina uthathwa njengomgcini esebenza kahle kakhulu indlela emfushane ukuthola umphumela oyifunayo.
Isixazululo omuhle ukuze inkinga akusho ukuthi ungakwazi manje unomphela bayakhohlwa ukuthi ungathola kanjani ukukhubazeka. Njalo ngemva kweminyaka emibili, invalids neqembu lokuqala kwakudingeka alandele inqubo kabusha luhlolo, abakhubazekile njengoba amaqembu lesibili nelesithathu ibhekane inqubo njalo ngonyaka. Kusukela kabusha luhlolo yezakhamuzi ekhululiwe ubudala yempesheni, abantu ekhubazekile zinokukhubazeka engelapheki yokwakheka, namanye iziguli, efanele nenqubo lomthetho.
"Gintama" anime. Izinhlamvu, uhlamvu yabo kanye incazelo eningiliziwe
Nokia 8310 - nganekwane ukuthi zonke singatholwa yinoma ubani
White futhi Fluffy ... Yini amaphupho iqhwa wawa?
I-Cyberport clan DotA 2 NaVi: ukubunjwa. Ukwakhiwa kwamanje kwe-NaVi: ithimba labesifazane nabesilisa